China yakatwasuka yakaderera-e girazi yekuwacha muchina wemhepo blade system fekitori uye vagadziri | Zhengxing Mechan
yakatetepa yakaderera-e girazi muchina wekuwachisa mweya blade system
1.1 Main drive ndeye giya dhiraivha, mota yekumhanyisa yakakwenenzverwa ne frequency inverter, dhijitari kuratidza show kumhanya uye girazi ukobvu. Roller Brush inotyairwa neepamusoro uye ezasi ma motors ane akapatsanurwa bhandi, ine kumeso kumhanya uye hwakareba hupenyu hwehupenyu.
1.2 Maplate esimbi echikamu chekuwachisa uye zvikamu zvinosangana nemvura zvakagadzirwa nesimbi isina simbi.
1.3 Zvese zvinopfuudza masevhisi erabha emuchina aya ane vulcanized rabha (Vanorambidzwa kusangana neacidic liquids.).
girazi yakatwasuka muchina wekuwachisa
1.4 Chikamu chekugezesa uye chikamu chekuomesa chinogona kumuka kusvika ku350mm seyakazara, iri nyore kuwacha nekuchengetedza.
1.5 Mushini une matatu maviri emabrashi (-150mm). Kana uchishambidza Low-E Girazi: Iwo ekumusoro maviri akaomarara mabhureki anogona kumutswa nesilinda uye ingosiya imwechete yakapfava bhurasho, izvi zvinodzivirira zvinokuvadza pamusoro pegirazi rinotarisisa, iro rinogona kugadzirirwa kusuka yakaderera-e girazi, girazi rinoratidzira rakajeka uye kupenya kwezuva girazi.
1.6 Kune firita yemhepo mukati mekupinda-mhepo kamuri yeanofuridza. Iyo yekuomesa mhedzisiro iri nani nemhepo yepamusoro yekufema. Iyo yose blower yakaiswa pamusangano, uye inogona kusimuka nekuwacha uye nekuomesa zvikamu, izvo zvinotora nzvimbo shoma.
1.7 Muchina une maviri maviri emhepo banga, ane mhepo huru uye yakanaka yekuomesa maitiro.
1.8 Mahwendefa esimbi ezvimwe zvikamu akapendwa neyepamusoro-giredhi muchina pendi.
Upamhi hwegirazi upamhi:
2500 mamirimita (upamhi)
Saizi yegirazi saizi
Girazi ukobvu renji
Ukobvu regirazi isingasviki 5mm, Vmax = 7m / min
Ukobvu regirazi iri 8mm kusvika 12mm, V <= 3m / min
Ukobvu regirazi iri 15mm-19mm, V = 2m / min
Nzira yekuchinja kumhanya kweiyo main drive:
kusiyanisa frequency frequency kudzora;
Kushanda tafura kukwirira
Pashure: otomatiki epanyama centrifugal kurapwa kwemvura dehydrator
Zvadaro: chimiro girazi kukuya makorari penzura bevel OG kutenderera muchina
Bhari Girazi Washer Machine
Benchtop Girazi Washer
Brashi Girazi Washer
Yekutengesa Girazi Washer
Magetsi Girazi Washer
Girazi repamusoro Washer
Industrial Girazi Washer
Girazi Girazi Washer